Cunsuriyadda Norway oo laga dayriyay - BBC News Somali
Cunsuriyadda Norway oo laga dayriyay
20 Nofembar 2013
Image caption Warsan Ismail
Xogbaadh ay samaysay gabadh asalkeedu Soomaali yahay laakiin reer Norway ah ayaa waxa ka muuqatay heer aad u sarreeya oo ah nacayb cunsurinnimo oo dadka Norwegian-ka ah ay u qabaan qawmiyadaha ajanebiga ah iyo kuwa asal ahaan ka soo jeeda dhaqammo kale.
Warsan Ismaaciil waxa gabadh da'deedu ay tahay 23 jir, waana ardayada barata culuunta caafimaadka iyo daawooyinka amma dhakhatarnnimada, kuna dhaqan oo ku kortay dalka Norway.
Maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxay gelisey adeegga Twitter-keeda farriimo iyo su'aalo ay dadweynaha u bandhigayso, oo ay wax kaga weydiinayso haddii ay la kulmeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin cunsurinnimo, nacayb, aflagaaddo, amma weerar ku salaysan midab-kala-sooc, takrooris, diin, cuqdado dhaqan iyo waxyaabo la mid ah.
Warsan waxay sheegtay inay la yaabtay oo aanay filayn baaxadda jawaabaha ay heshay iyo sheekooyinka faraha badan ee dadweynuhu ay kaga sheekaynayaa waayo-aragnimadii ka soo martay dalka Norway ee la xidhiidha dhibaatooyinkaasi cunsurinnimada.
Warsan waxa kale oo buug ay ka qortay arrintaasi ay kaga sheekaynaysaa waayo-aragnnimadeeda shakhsiga ah oo ay ka mid tahay in galab ay ka soo noqotay dugsi hoose, ay gurigii ugu timid hooyadeed oo booliis ku hareeraysan yahay; sababta oo ah dadkii jaarka ahaa oo intey aflagaadeeyeen qoyskaasi ka bacdina ku soo daayey eydoodii.
Waxa kale oo ay sheegtay in dadku ay ku kacaan oo ay ku dhiiradaan inay geystaan aflagaado amma falal kale oo cunsurinnimo, gaar ahaan marka ay cabsan amma sakhraansan yihiin, mararkaasi oo badiyaa ay ku weydiiyaan xagga aad ka timid, iyo sababta aad u timid.
Warsan waxay buuggeedu ku sheegtay in dhibaatada ugu weyni ay ku dhacdo dadka cusub ee soo-galootiga ah, ee aan weli si fiican u baran afka iyo dhaqanka amma aan la wada qabsan dalka iyo mujtamaca.